अमेरिकन सीडीसीबाट कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त देशको सुची अपडेट, नेपाल अति उच्च जोखिममै « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकन सीडीसीले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त देशको सुची अपडेट गरेको छ । जोखिमका आधारमा विभिन्न ४ प्रकारका सुचीहरु बनाएको सीडीसीले नेपाललाई भने अति उच्च जोखिमकै सुची अर्थात् सबैभन्दा खराब चौथो स्तरकै सुचीमा राखेको छ ।
सोमबार अपडेट गरिएको सुचीमा नर्वेलाई जोखिमयुक्त देशको सुचीबाट अति उच्च जोखिमयुक्त देशको सुचीमा राखिएको छ । कोरोना सम्बन्धि प्रतिबन्धहरु खुकुलो बनाएको नर्वेलाई सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त देशको सुचीमा राखिएपनि छिमेकी देशहरु स्वीडेन र डेनमार्कलाई भने तेश्रो स्तरको उच्च जोखिमयुक्त देशको सुचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै बुल्गेरियालाई पनि तेश्रोबाट चौथो स्तरको सुचीमा राखिएको छ । विगत २८ दिनमा हरेक एकलाख जनसंख्यामा ५ सयभन्दा बढी संक्रमित भएमा उक्त देशलाई अमेरिकन सीडीसीले अतिउच्च जोखिमयुक्त देशको सुचीमा राख्ने गरेको छ ।
सोमबार ६ वटा नयाँ देशहरुलाई तेश्रो स्तरमा सुचिकृत गरिएको छ । बंगालादेश, इक्वाटोरियन गायना, पानामा, सेन्ट बार्थेलेमी, सिंगापुर र स्लोभाकियाको स्थीतिमा सुधार आएको भन्दै तेश्रो स्तरमा राखिएको छ । यीमध्ये बंगालादेश, पानामा र सेन्ट बार्टस् चौथो स्तरबाट तेश्रोमा गएका हुन् भने अन्य देशहरु दोश्रोबाट तेश्रोमा गएका हुन् ।
सीडीसीले चौथो स्तरमा रहेका देशमा सकभर यात्रा नगर्न अमेरिकनहरुलाई चेतावनी दिएको छ । यात्रा गर्नैपरे पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएरमात्र यात्रा गर्न सुझाव दिइएको छ । तेश्रो स्तरमा रहेका देशमा भ्याक्सिन नलगाएकाहरुलाई अत्यावश्ययक बाहेकका यात्रा नगर्न सुझाव दिइएको छ । दोश्रो स्तरमा रहेका देशमा भ्याक्सिन नलगाएका र जोखिममा रहेकाहरुलाई यात्रा नगर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै कम जोखिमयुक्त पहिलो स्तरको सुचीमा रहेका देशमा यात्रा गर्दा पनि भ्याक्सिन लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई सकभर नेपाल नजान सुझाव दिएको छ । जानै परे पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएको सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिपनि संक्रमित हुने र अरुलाई फैलाउने जोखिममा रहेको सीडीसीको भनाई छ । भ्याक्सिन लगाएकै भएपनि नेपालमा ६ फिटको दुरी कायम गर्न र मास्क लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
नेपालबाट अमेरिका जाँदा के गर्ने ?
नेपाललाई चौथो स्तरमा राखेपनि नेपालीलाई अमेरिका प्रवेशमा भने कुनै समस्या छैन । अमेरिकाले भिसावाहक नेपालीहरुलाई कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्टका आधारमा सहजै प्रवेश दिदै आएको छ । अमेरिकाले चीन, इरान, युरोपको शेंगेन क्षेत्र, यूके, आयरल्याण्ड, ब्राजिल, साउथ कोरिया र भारतबाट अमेरिका जानेहरुमाथि कोरोना सम्बन्धित प्रतिबन्धहरु लगाएको छ । तर नेपालबाट अमेरिकामा जानमा कुनै रोकतोक छैन । अमेरिका प्रवेश गर्दा कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्दैन । नेपालबाट खोप नलगाएकाहरु पनि अमेरिका सहजै जान सक्छन् ।
अमेरिकन पासपोर्टवाहक नेपाल आउँदा के गर्ने ?
अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा अमेरिकन नागरिकले कोभिडबिरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको भएमा अन अनराइभल भिसा प्राप्त गर्न सक्छन् । तर कोभिडबिरुद्धको खोप नलगाएको भएमा भने उनीहरुले अमेरिकामा रहेको दूतावास वा कन्सुलेटबाटै भिसा लिएर आउनुपर्छ ।
कोभिडबिरुद्धको खोप लगाएका अमेरिकन पासपोर्टवाहकले अध्यागमन प्रवेशबिन्दुमा भिसाका लागि आवेदन गर्दा भिसाका लागि आवश्यक अन्य कागजपत्रका अतिरिक्त थप कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले कोभिड खोपको पूर्ण मात्रा पूरा गरेको १४ दिन पूरा भएको प्रमाण, विमान चढ्न चेकइन हुँदाको अवधिले ७२ घण्टाभित्रको कोभिड परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट, पर्वतारोहण र पदयात्रामा आउनेहरुले सो सम्बन्धी अनुमतिको प्रतिलिपि, नेपालमा होटल बुक गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । पर्वतारोहण र पदयात्रामा नआएका अन्य पर्यटकका लागि अनुमतिको प्रतिलिपि आवश्यक पर्दैन । त्यस्तै सीसीएमसीमा अनलाइन लगइन गरेर नेपाल आगमन फारम पनि भरेर त्यसको प्रिन्ट प्रति पनि बुझाउनुपर्नेछ ।
नेपालको अध्यागमन विभाग
कोभिडविरुद्धको खोप नलगाएका वा मात्रा पूरा नगरेकाहरुले नेपाली नियोगमार्फत भिसा लिएर र एजेन्सीमार्फत नेपाल भ्रमणमा आउन सक्छन् । उनीहरुले पनि विमान चढ्न चेकइन हुँदाको अवधिले ७२ घण्टाभित्रको कोभिड परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट, नेपालमा होटल बुक गरेको प्रमाण र सीसीएमसी फारम भरेर पेश गर्नुपर्छ । यसरी प्रवेश गर्नेहरु १० दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टीनमा बसेपछि ११ औं दिनमा कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछिमात्र उद्देश्य बमोजिमको काममा संलग्न हुन पाउँछन् ।
एनआरएन वा उनीहरुका परिवार, नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई पनि खोप लगाएको प्रमाण, कोरोना नेगेटिभ प्रमाण र सीसीएमसी फारम भरेर बुझाएपछि अन अराइभल भिसा दिइन्छ ।